RW Cumar oo Dhaliilay laamaha Amniga Dowladda Somalia – Radio Daljir
RW Cumar oo Dhaliilay laamaha Amniga Dowladda Somalia
Nofeembar 14, 2015 1:08 b 0
Somalia, November 14, 2015 (Daljir) —Qoraal uu R/wasaaraha Soomaaliya Cumat C/rashiid u diray golaha amaanka ee Q,M 9 bishaan ayuu kaga hadlay fashil uu sheegay inuu haysto hogaanka hay’adaha amaanka Soomaaliya.
R/wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ayaa waxaa uu qoraalka uu Q,M diray oo uu si guud uga hadlay xaaladda Soomaaliya siyaasad ahaan iyo amaan ahaanba waxaana qeybta hore ku sheegay in dhamaadka sanadkaan dhinacyada dawlada Soomaaliya taageera iyo madaxda maamulka goboleedyada dalka ka jira ka wada hadli doonaan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta iyo waqtiga la qabanayo intaba.
Arrinta ku saabsan amaanka mar uu ka hadlayay waxaa uu sheegay in ciidamada dawlada Soomaaliya ay awood u leeyihiin sugida amaanka dalka kana adkaan karaan xarakadda Al-Shabab una mahad naqayaan ciidamada AMISOM ee dawlada taageera.
Dhawaan dawladu inay awood u helayso bixinta mushaar ay helaan ciidamada dawlada Soomaaliya taasoo dhiiri galin u noqonaysa ciidamada Soomaaliyeed ayuu R/wasaare Sharmaake sheegay.
Marka ay Shabab meel weeraraan waxaa uu R/wasaaruhu sheegay inay jawaab celin wanaagsan ka bixiyaan oo ay bad baadiyaan nolosha dadka ku jira hadba meesha la weeraro.
R/wasaaraha Soomaaliya waxaa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ay ku qabaan dhanka sirdoonka oo uu sheegay inay ku fashilmeen ka hor tagista weerarada ay Al-Shabab soo maleegaan oo qaarkoodba laga sii war helo sida uu yiri.
“Sababtu waxay tahay si guud ayuu u fashilanyahay hogaanka sirdoonka Soomaaliya Shacabkuna waa uu ka waayay ka hor tag” ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray R/wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid waxaana uu intaa ku daray in loo baahanyahay in laga war helo shirqoolada ay Al-Shabab maleegaan.
R/wasaaruhu waxaa uu ugu dambeyn qoraalkiisa ku sheegay in loo baahanyahay in arrintaan wax laga qabto oo lasoo afjaro dhibaatada ka taagan fashilka haysta hogaanka sirdoonka Soomaaliya.
Dhawaan warbixin ay Al-Shabab barahooda internetka ku baahiyeen waxay ku faaneen inay ka sirdoon wanaagsan yihiin dawlada Soomaaliya iyo xataa ciidamada AMISOM.